Fayruska COVID-19 (COVID-19 in Somali) – Bristol Somali Media Group
Somali Media Group March 17, 2020 March 17, 2020 BSMG posts, Health
COVID-19 waa fayrus ama cudur cusub oo la kala qaadi karo, kaas oo waxyeelayn kara sambabahaaga iyo neef mareenadaada.
Faahfaahin dheeraad ah iyo talo kusaabsan COVID-19 oo af-Soomaali iyo English ku qoran waxaad ka heli kartaa dokumentiyada halkan ku lifaaqan. Dokumentiyadan waxa soo diyaariyay ururka Doctors of the World. Talooyinka dokumntiyada lagu soo bandhigay waxay ku salaysanyihiin talooyinkii ay bixisay xukuumadda UK.
Halkan guji Somali Covid-19 Guidance – 13.03.2020
Click here for English Covid19 Guidance – 13.03.2020
Previous ‘The law is just and fair but those who deliver services are not fair’ – Bristol FGM model?
Next VIDEO: Sheekh Faysal Waylac: Xidhiidhka ka dhexeeya wakiilashada Ilaahay iyo dedaalka shaksiga – #COVID19